ရေစီးဆင်းမှုရပ်တန့်ခဲ့သည့်ဓာတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန် ရေပြန်လည်စီးဆင်း - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၁၂ – ဒုတိယ အဆင့်တာပေါက်ခဲ့သည့်အတွက် ရေစီးဆင်းမှုရပ်တန့်ခဲ့ရသည့် ပြင် ဦးလွင် ဓာတ်တော်ချိုင့်မှာ ဩ ဂုတ် ၁၂ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် ရေစီးဆင်းမှုပုံမှန်ဖြစ်သွား ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့ တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မင်းထံမှ သိရသည်။
ဩဂုတ် ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီဝန်းကျင်ခန့်က ရေစီးဆင်းမှု ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး ဩဂုတ် ၁၂ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ပုံမှန်ရေစီး ဆင်းနေပြီဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။””ဓာတ်တော်ချိုင့်က မနေ့ ဩဂုတ် ၁၁ ရက် နေ့လယ်က တတိယ အဆင့်က ရေမဆင်းတော့လို့ ချက် ချင်း မွန်းလွဲ ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီ လောက်က မီးသတ်နဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အမှုဆောင် နဲ့ ရပ်ရွာလူထုနဲ့ပေါင်းပြီး အကြောင်း ရင်းကိုရှာတယ်။ မိုးချုပ်သွားတော့ သေသေချာချာ မသိလိုက်ဘူး။ ဒီနေ့ မနက်တော့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ် တိုင် ကွင်းဆင်းပြီးလုပ်တော့ ဒုတိယ အဆင့်က တာကပေါက်သွားတာ ပေါ့။ မြေအောက်ရေဝင်သွားတာ ပေါ့။ အခုဟာကဖာပြီးသွားပါပြီ။ နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ””ဟု တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဦးအောင်မင်းက ဒီမို ကရေစီတူဒေးသို့ ဩဂုတ် ၁၂ ရက် တွင် ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ တာပေါက်ရခြင်း အကြောင်းရင်းသုံးချက်ဖြစ်နိုင်ရှိ ကြောင်းနှင့် ဒေသခံများအနေဖြင့် ဓာတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်တွင် မိုင်း ခွဲ၍ ငါးဖမ်းခြင်း၊ တာဘိုင်များ ဖြင့် ရေစီးဆင်းသောလမ်းကြောင်း များကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမပြုရန်လို အပ် ကြောင်းသိရသည်။
“”ပေါက်သွားတာကတော့ ကျွန် တော်တို့မြင်တာကတော့ တစ်အ ချက်က ထုံးကျောက်လိုဏ်ဂူတွေ၊ မြေအောက်ရေတွေကြောင့် သ ဘောသဘာဝအရဖြစ်တယ်။ နှစ် အချက်ကတော့ အဲဒီထဲမှာ တိုင်တွေ ဆင့်ပြီး ဒေသခံတွေကနေထိုင် လာတဲ့အခါမှာ ငါးဖမ်းတာတွေ လည်း ရှိနိုင်တာပေါ့။ သေချာ တော့ပြော ခဲ့တာပေါ့။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဝိုင်းထိန်းမှရမယ် လေ'”ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြော သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဓာတ်တော် ချိုင့်ရေတံခွန်အား ရေတိုထိန်းသိမ်း ရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ထားကြောင်း နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရကို တင်ပြပြီးသေသေချာချာဆောင် ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မင်း က ပြောပြသည်။
ရေးမြို့နယ်တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အိမ်ခြေတစ်ရာခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိနိုင်ဟု ခန့်မှန်း
ချောင်ယွန်ဖတ်က မိမိကွယ်လွန်ပြီးနောက် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လှူဒါန်း သွားမည်ဟုဆို
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ရှိ လူနေ အိမ်တစ်လုံးပေါ်သို့ လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်၊ လူ၊ တိရစ္ဆာန် အထိအခို??
ကွာလာလမ်ပူ – စင်ကာပူ အမြန်ရထားလမ်း စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းမည်ဟု မဟာသီယာ အတည်ပြု
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရန် ဆွေးနွေးနေသော်လည်း ဟားမတ်စ်တိုိ့က ဒုံးပျံဖြင့်ပစ်၊ အစ္စရေးက ဂါဇာကို ဗုံး??